लन्डनमा कमरेड भाउजू | samakalinsahitya.com
बेलायतवासी नेपाली साहित्यकार कृष्ण बजगाईंको पाँचौँ कृति हो, कमरेड भाउजू । यसअघि दुइटा लघुकथासंग्रह प्रकाशित गरेका बजगाईंले जीवनको भोगाइलाई कथाको रूप दिएका छन् । १५ वर्षभन्दा बढी डायस्पोराको बसाइका क्रममा आफूले भोगेका यान्त्रिक जीवनशैली र त्यहाँ देखे/सुनेका कुरालाई टपक्क टिपेका छन् ।
यसरी बनाएका कथाहरूको मूल पाटोचाहिँ व्यंग्यचेत हो । यो सत्यको उद्घाटन संग्रहको शीर्षकले नै गरेको छ । कमरेडका पछाडि न दाजु लगाइन्छ, न त भाउजू । कमरेड आफैँ पूर्ण परिचयको शब्द हो । तर, कृष्ण बजगाईंले 'कमरेड भाउजू' भेटेका छन् लन्डनमा ।
चित्रणमा निर्मम देखिन्छन् कथाकार । कमरेड भाउजू शीर्षक कथामा पढ्न पाइन्छ, 'केही सहभागीहरू बियर र हि्वस्कीका गिलास समाएर राष्ट्रिय चिन्तनमा डुबेका थिए । ...कोही नेपालमा सरकार ढाल्ने र नयाँ सरकार बनाउने योजनाका गफ हाँकिरहेका थिए । उनीहरूको कुराको निचोड थियो- नेपालमा सरकार चलाउन सक्ने क्षमता भएका मानिस नै छैनन् ।'
युरोप घुम्दै पछिल्लो समय बेलायत पुगेका कृष्ण बजगाईंको कथा सम्पूर्णतामा उनकै भाषामा डायस्पोरिक छ । नेपालसन्दर्भ त आइरहन्छ घरीघरी तर सबैजसो कथाको मूल भाग युरोप छ, त्यसमाथि पनि बेलायत छ । नेपाली कामरेडहरूको विद्रुपण अनौठो ढंगबाट चित्रण गरिएको छ । दोस्रो 'कमरेड' कथाको निष्कर्षमा कथाकार लेख्छन्, 'पार्किङ गरिएको गाडीभित्र ल्याम्पपोस्टको मधुरो प्रकाशको उपस्थिति थियो । गाडीभित्र मौनता थियो । कमरेड विश्वास पूरै पुँजीवाद तथा अवसरवादी भएको ठहर गरे, कमरेड अटलले । कमरेड अटल अझै पनि जडवादी कम्युनिस्ट नै रहेको ठोकुवा गरे, कमरेड विश्वासले । दुवै जना एकअर्कालाई मात्र हेरिरहेका थिए, मौन ।'
नेपाली शिक्षा पद्धतिको बिजोग चर्चा पनि भेटिन्छ कथामा । लेखेका छन् कथाकारले, 'आफूले एमए पास गरेको डिग्री दुई-चार वर्ष अरबको चक्कर काटेर आएको आठ कक्षा फेल खडानन्दको सीपसँग दाँज्छु । उसले धेरै कमाएको देख्छु ... नेपालको बोक्रे शिक्षाको धाक उतै मात्र चल्छ । यता त सीप वा पाखुरी चाहिन्छ बाँच्न ।' यो कथाको शीर्षक हो, 'तेस्रो कुकुर' । युरोपेली मालिक्नीको कागजी लोग्ने हुन्छ, तेस्रो कुकुरको मूलपात्र । तर, कामचाहिँ कुकुर स्याहार्ने नोकर । स्वास्नीसँग एक साँझ पनि सँगै सुत्न नपाएको लोग्नेलाई हकार्दै स्वास्नी आदेश दिन्छे, 'मलाई खुसी राख्न मेरा कुकुरहरूलाई ठीकठाक राख्नू ।' मूलपात्रकी स्वास्नीका दुइटा मात्र कुकुर हुन्छन् । मूलपात्रले अन्तिममा मात्र थाहा पाउँछ, आफू तेस्रो कुकुर भएको कुरा ।
वाह ! रूखमा नोट फलेको सपना देखेर दलाललाई पैसा खुवाउँदै, चाहिँदा नचाहिँदा कष्ट खेप्दै जान चाहने हाम्रा युवाको सपनाको युरोपेली समाज ! बजगाईंको युरोपेली समाजप्रति असहमति अनुभव हुन्छ, उनका डायस्पोरिक कथाहरू पढ्दा । त्यो समाजमा गे हुन्छन्, सम्मानित जीवन बाँचेका । लेस्बियनहरूलाई स्थानीय समाजले घृणा गर्दैन । कथाकारले दुइटा लेस्बियन कथा लेखेका छन् भने एउटा गे कथा लेखेका छन् । उनको मनोआग्रहसहितको प्रस्तुतिले नेपाली पाठकलाई भने शान्ति नै दिन्छ ।
हाम्रो समाजमा अझैसम्म पनि विकृति र विकार मानिने यस्ता विवाहको सिकार युरोप पुगेका हाम्रा नेपालीले कसरी हुनु परिरहेको चित्रण छ, 'मौन युद्ध' शीर्षक कथामा । नेपालको कुनै बाल आश्रममा आएका एक जोडी विदेशीले काले नाम गरेको अनाथ बच्चालाई मिलनविन्दु नाम दिएर युरोप लैजान्छन् । बाउआमाले दिने माया र निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पनि पूरा गर्छन् । त्यही क्रममा उनीहरू एकअर्कासँग छुट्टन्िछन् । बाबुआमा छुट्टनिे कारण थाहा नपाएको मिलनविन्दु आमासँग कारण खोज्छ । त्यतिबेला मात्र उसलाई थाहा हुन्छ, नेपाल जाँदा महिला हर्मोन खाइरहेकी आमा यथार्थमा केटो रहेछ र त्यो केटो बुढिँदै गएपछि बाबु हुनेले अर्को युवा गेसँग बिहे गरेको रहेछ ।
लेस्बियन स्वास्नीको सिकार भएको अर्को एउटा पात्र भेटिन्छ, 'म सिसिफस' शीर्षकको कथामा । लोग्नेको काम रेस्टुराँको ढोकामा कहिले नेपाली पोसाक त कहिले शेर्पा अनि कहिले तराइर् वासीको पोसाकभित्र समेटिएर सलाम गर्ने मात्र हुन्छ । लोग्ने त्यही रेस्टुराँको एउटा सुविधासम्पन्न कोठामा बस्छ । तर, उसकी स्वास्नी कहाँ बस्छे, उसलाई थाहा हुन्न ।
नेपालमा हुँदा हुन नसक्ने पारिवारिक विघटन, युरोपेली समाजमा कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कथा पनि पढ्न पाइन्छ संग्रहमा । पति हुन्छ वैज्ञानिक, पत्नी हुन्छे गृहिणी । एउटा अनुसन्धानमा हे लिएको मान्छे । पत्नी हुन्छे, लन्डनको रमालोमा रमझम गर्न पाइन्छ भनेर वैज्ञानिकको पछि पछि लागेर आएकी महिला । वैज्ञानिक विज्ञानमै हराउँछ, रमझम गर्न चाहने महिला पल्लो अपाटर् मेन्टमा बसेको भारतीयसँग कतै हराइसकेकी हुन्छे ।
नेपाली मनको कथाकारले पश्चिमी सभ्यतालाई सकार्न नसकेका कारण देखेका धेरै नकारात्मक पक्ष कथामा समेटिएका छन् । तर, युरोपको यथार्थ यही त हो । नक्कली बिहे, सम्झौताको बिहे, गे बिहे, लेस्बियन बिहे, कन्ट्रयाक्टको बिहे हामीलाई पाच्य हुँदैनन् । नेपाली समाज बिस्तारै भर्जिनिटीबाट बाहिर निस्कन थालेको छ । तर, अझै यस्ता अनौठा बिहेलाई पचाउन सक्ने अवस्थामा पुगेको छैन । यति मात्र होइन, फगत पैसा कमाउने उद्देश्यले नक्कली विवाह र नक्कली छोडपत्रको कार्यलाई पनि कथाकारले राम्रो मानेका छैनन् । त्यसैले यताका नेपाली पाठकका लागि व्यंग्यचेत र असहमतिले भरिएका उनका कथा पढौँ पढौँ लागिरहने खालका छन् ।
थप दुइटा कथा मार्मिक छन् । एउटा 'मिडिया मुस्कान' र अर्को 'गणतन्त्रपछिको प्रेम' । यी दुवै कथा नेपालको हिंसात्मक युद्धसँग जोडिएका छन् । यी दुवै कथामा व्यंग्यचेत नै पाइन्छ । संग्र हका सबैभन्दा सुन्दर कथा पनि यिनै हुन् ।
लेखक : कृष्ण बजगाईं
मूल्य : १७४ रुपियाँ
प्रकाशित: चैत्र १, २०७१